Soomaaliya Oo Kaga Qeyb gashay Qaahira Bandhiga Buugaagta Caalamiga – Radio Muqdisho
Soomaaliya Oo Kaga Qeyb gashay Qaahira Bandhiga Buugaagta Caalamiga
Muddo 25 sano kaddib ayaa Soomaaliya waxa ay ka qeyb gashay bandhiga buugaagta Caalamiga oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Qaahira ee dalka Masar, iyadoo bandhigaasi ay ka qeyb galeen qorayaal Soomaaliyeed iyo milkiilayaasha Maktabadaha ee Soomaaliyeed.
Furitaanka bandhiga buugaagta caalamiga iyo carabta ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’isul wasaaraha dalka Masar iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dalkaasi, iyadoo Ra’isul wasaaraha uu booqday Soomaali ku sugan dalka Masar, isagoo u hambalyeeyay qorayaasha Soomaaliyeed oo uu ku ammaanay in door muuqata ay ka qaateen horumarinta dalka.
Axmed Maxamed Buqaari oo ah cilmi baare Soomaaliyeed kana qeyb galaya bandhigaasi oo la hadlay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay in Soomaaliya doorkii ay ku laheyd Soomaaliya caalamka ay la soo laabatay islamarkaana ay ka qeyb galeyso shirar caalami ah oo tuaale u soo qaatay bandhigani oo markii ugu horeysay ay ka qeybgaleyso.
Bandhiga buugaagta oo sanadkiiba mar la qabto ayaa sanadkani waxaa marti galisay Dowladda Masar, iyadoo shirkaasi ay ka qeyb galeen 26 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto, waxaana ka qeyb galka bandhigaasi uu ka dhigan yahay in Soomaaliya ay cagta saartay wadadii horumarka islamarkaana uu ka muuqanayo calanka Soomaaliya shirarka caalamiga ah taasi oo amaanteeda ay leedahay Dowladda Soomaaliya oo dadaal dheer u gashay wanaajinta xiriirka caalamiga ah.
DAAWO-Nalalka cad ceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay Jidka Warshadaha "SAWIRRO"